ऊर्जामा लगानीको सही व्यवस्थापन « News of Nepal
ऊर्जामा लगानीको सही व्यवस्थापन
१२ माघ २०७३, बुधबार
(नरेन्द्र केसी) सरकारले पहिलोपटक जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्न अनलाइनबाट आमनागरिकका लागि प्रतिबद्धता आह्वान गरेको छ । ठीक यही बेला देशका प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री युएईमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलनमा भाग लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ऊर्जामा लगानी गर्न आह्वान गर्दैै फर्केका छन् । प्रतिबद्धताको आवश्यक बजेट पुग्यो भने कुन आयोजनामा लगानी गर्ने भन्ने सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकार वा प्राधिकरणसँग भएका आयोजनामध्ये नै यसमा छनोट गरिने र आयोजनाको अवस्था, भूगोल, लागत सबै कुरा सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोजनाको अवस्था, लागत, निर्माण अवधि, व्यक्तिले पाउने ब्याज, लगानी प्रतिफलका विषय सार्वजनिक भएपछि लगानी प्रतिबद्धता अझ बढ्न सक्छ । यसको आधारमा इच्छुक व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीले स्वीकार वा अस्वीकार गरेपछि लगानीको प्रक्रिया शुरु हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नागरिकबाट उठाइएको रकम जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीले अगाडि बढाउने नलसिंहगाड, भेरी १, शारदा, माथिल्लो अरुण, तल्लो अरुणजस्ता महत्वपूर्ण र बहुउद्देश्यीय आयोजनामा लगानी गर्ने भनिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र अन्य जानकारीपछि अझ लगानी प्रतिबद्धता बढ्न सक्छ । यसरी हेर्दा जनस्तरबाट मात्रै जलविद्युत्का लागि एक खर्ब बढी लगानी प्रतिबद्धता सहजै आउने देखिन्छ । त्यसो त केही हप्ताअघि ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको एक कार्यक्रममा विभिन्न कोष र संस्थानहरूले सरकारले भनेकै समयमा १ खर्ब बढी लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताएका थिए ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कल्याणकोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता निकायहरूले सरकारले चाहेको बेलामा लगानी गर्न सक्ने गरी १ खर्ब रकम बचत रहेको बताएका थिए । अर्कोतिर हामीले हेर्यौं भने मुलुकमा भित्रिन रेमिट्यान्सको सानो हिस्सा मात्र जलविद्युतमा लगानी गर्न सकियो भने त्यहाँबाट धेरै लगानी जम्मा हुनेछ । पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको दरमा केही गिरावट आए पनि वर्षमा मासिक ५० अर्ब बराबर रकम नेपाल भित्रिने गरेको छ । यो हिसाबले हेर्दा बर्सेनि ६–७ खर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिन्छ । यसको १० प्रतिशत मात्र जलविद्युत्मा लगाउन सकियो भने ६०–७० अर्बदेखि १ खर्ब रुपियाँसम्म जम्मा गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि स्वेच्छिकरुपमा आह्वान गर्ने मात्रै भन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा प्रोत्साहन गर्ने नीति नै अघि सार्यो भने रेमिट्यान्सबाट वार्षिक १ खर्ब लगानी जलविद्युत्मा सुरक्षित हुनसक्छ । सरसर्ती हेर्दा पनि जनस्तरबाट १ खर्ब, विभिन्न कोषबाट १ खर्ब र रेमिट्यान्सबाट १ खर्ब रकम जलविद्युत्मा लगानी गरियो भने यसबाट निकै ठूला आयोजना अघि बढाउन सकिनेछ ।
सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्– नेपालमा ८३ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । तर विडम्बना, अहिले नेपालको विद्युत् उत्पादन दर चार अंकमा उक्लन सकेको छैन । अहिले झन्डै १ हजार ५ सय मेघावाट विद्युत् भए नेपालभरि बाल्न पुग्छ । त्यसो त तीन अंककै विद्युत्ले पनि राजधानी लोडसेडिङमुक्त गर्न सकिंदो रहेछ भन्ने अहिले देखिएको छ । अब विद्युत् माग पनि गुणात्मक ढंगले बढ्ने निश्चित छ । एकातिर उद्योगधन्दा कलकारखानाको वृद्धि हुँदै छ भने अर्कोतिर विद्युत्मा आमनागरिकको पहुँच पनि विस्तार हुँदै छ ।
७५ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडिंदासम्म विद्युत्को माग पनि गुणात्मक ढंगले बढ्नेछ । ऊर्जा मन्त्रालयकै प्रारम्भिक प्रक्षेपण हेर्दा सन् २०२० सम्ममा नेपालमा विद्युत्को माग ६ हजार ८ सय मेघावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसो त नेपालले सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्रको सूचीमा दर्ज हुने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाइसकेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी आदिका कारणले यसमा केही धक्का लागे पनि सन् २०२२ सम्म भएन भने सन् २०२५ सम्म भए पनि नेपाल विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जानै पर्छ । त्यसका लागि आवश्यक सूचक पार गर्न निश्चित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ ।
सही व्यवस्थापन र दृढ इच्छाशक्तिका साथ अघि बढ्ने हो भने विद्युत् उत्पादन गर्न धेरै समय पर्खनुपर्छ वा देश धनी नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । हामीले यसका लागि इथियोपियाबाट किन नसिक्ने ? कुनै बेला इथियोपिया हामीभन्दा पनि गरिब देश हो । इथियोपियालाई संसारकै एक नम्बरको गरिब देश भनिन्थ्यो । तर, यो देशले राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक समृद्धिको बाटो पकडेपछि यहाँ गुणात्मक ढंगले विद्युत् विकास भइरहेको छ । सन् २००२ सम्म ५ सय मेघावाट विद्युत् रहेको यो देशमा सन् २०१६ मा आइपुग्दा २ हजार मेघावाट बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यसरी हेर्दा प्रतिवर्ष एक सय मेघावाटका दरले विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यो क्रम अझै बढेको छ ।
अबको पाँच वर्षमा इथियोपियाले १० हजार मेघावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने निश्चित भइसकेको छ । यसबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न जरुरी छ । विभिन्न देशको अनुभव र हाम्रो आफ्नै अभ्यासबाट पनि के देखिन्छ भने, जलविद्युत्मा लगानीको समस्या छैन, सबैभन्दा ठूलो समस्या यसको सही नीति, त्यसलाई हाँक्ने नेतृत्व र सही व्यवस्थापन हो, जुन कुरा ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको प्रगतिबाट पनि हामी प्रस्ट बुझ्न सक्छौं ।
हामीले संविधानमा प्रस्ट लेखिसक्यौं– नेपालको अर्थनीति समाजवाद उन्मुख हुनेछ । अर्थनीतिले नै समाज वा राज्यव्यवस्थाको पनि निर्धारण गर्ने भएकाले यो पनि भन्न सकिन्छ कि नेपाल अब समाजवादी बाटोमा अघि बढ्नेछ । समाजवादको मुख्य उद्देश्य समान वितरण हो । उत्पादन नै छैन भने कसरी हुन्छ वितरण ? गरिबको वितरण समाजवाद हुनसक्दैन । त्यसैले अब हामी नाकले टेकेर भए पनि आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नै पर्छ । समृद्धि आन्तरिक समाज वा राज्य व्यवस्थासँग मात्र जोडिँदैन, यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग पनि जोडिन्छ ।
हामीले नूनदेखि सुनसम्म विदेशबाट ल्याउने, वैदेशिक अनुदान र ऋणको भरमा देश चलाउने अनि हामी स्वाभीमान छौं, राष्ट्रिय स्वाधीनता चाहन्छौं मात्र भनेर गरिने गर्व आत्मरति मात्र हो । देश समृद्ध र स्वाधीन बन्ने भनेको आत्मरतिले होइन, आत्मनिर्भरताले हो । हामीले विदेशीलाई धेरै कुरा बेच्न नसके पनि विदेशबाट थोरै कुरा किनौं । अरु नसके पनि हामीले बिजुली बेच्न सक्छौं । त्यसका लागि हरेक खोलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमताको विकास गरौं, हरेक योजनामा जनताको लगानी सुनिश्चित गरौं, त्यसबाट नै जनताको समृद्धि र देशको स्वाधीनता सुनिश्चित हुनेछ ।
आगामी आ.व.को सङ्घीय बजेट र सहकारी
खोपाइलो नीति र भत्ताको उकुसमुकुसमा हजुरबाहरु
यो एक–अर्कालाई माया गर्ने समय हो
बजेटले समेट्न नसकेको शिक्षा क्षेत्र
असल मानिसलाई मात्र किन नराम्रो भैरहन्छ
सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता दिन अस्वीकार
फेरि नेतृत्व हत्याउने रणनीतिमा देउवा :..
पत्रकारलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सर्वोच्चको आदेश
ज्वाला संग्रौलासहित ३ जना प्रहरी नियन्त्रणमा
१३ औँ महाधिवेशनपछि काँग्रेस निकै कमजोर..
प्रहरीकाे‍ छापापछि अखबार बिक्री ह्वात्तै बढ्यो
काँग्रेसलाई सक्षम नेतृत्व चाहिएको छ : नेता पौडेल
२४ घण्टामा थप ५१ संक्रमितको मृत्यु, २४४२ जनामा संक्रमण
उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने मेरो मूल उद्देश्य : मन्त्री यादव
उपत्यकाका सिडियोहरुको बैठक बस्दै, निषेधाज्ञा थप्ने तयारी
स्याङ्जामा थप एक हप्ता निषेधाज्ञा थपियो
फेरि नेतृत्व हत्याउने रणनीतिमा देउवा : पहिलो चरणमा प्रदेश स्तरीय केन्द्रीय सदस्यहरुसँग छलफल गर्दै
नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा काफ्ले
घुससहित सहायक वन अधिकृत पक्राउ